TORITENY Alahady 25 Jona 2017 | FJKM Amboniloha
Vavolombelon’ny Fanahy Masina ny Tompo.
Lioka 21 : 34 – 36 / Mika 3 : 5-8 / Gal 5 : 16 – 25
Alahady natokan’ny Foibe FJKM ho Alahadin’ny Sampana Vokovoko Manga mba iatrehan’ny Malagasy ny fety ao anatin’ny fifalina sy ny fiadanana.
« Koa miambena ianareo ka mivavaha mandrakariva , mba hahery hianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan’ny zanak’olona » Lio 21 : 36
Inona no hafatra tian’Andriamanitra ampitaina amiko amin’izao ankatoky ny fety izao ?
1- Mitandrema ka miambena ary mivavaha mba hahery ianareo
Sitraky ny Tompo indrindra raha olona vonona sy miambina ny mpanara-dia azy . Voalohany indrindra dia asainy tandremana ny fontsika mba handositra , ny fiahiahiana izao fiainana izao ny momba ny nofo , “Fa miharihary ny asan’ ny nofo, dia izao: Fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adi-lahy, fiafonafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra.” Galatiana 5 : 22
Ireo voatanisa rehetra ireo izay asan’ny nofo mampanara-po ny filàna ao anaty ao, Izao anefa, ny fisotroana toaka dia ataon’ny olona mba hanadinoana ny olana maro samy hafa atrehiny eo amin’ny fiainana kanefa anie dia tsy mahafaka olana akory fa vao mainka aza sady manimba ny tena no manapotika ny fiainan’ny ankohonana fotsiny. Aoka àry tsy ho voafitaka isika fahitandrina, hiambina sy hivavaka isika mba tsy hivarilavo fa hitombo hery eo am-piatrehana ny fiainana.
2- Satria tsy maintsy ho avy ny Tompo hitsara ny velona sy ny maty
Manimba ny ho aviny ny olona izay mametraka sy manankina ny fiainany amin’ny asan’ny nofo . Mamela ny olona malalaka amin’ny safidiny ny Tompo nefa mampatsiahy kosa Izy fa tsy maintsy hiatrika fitsarana izy amin’izay ataony rehetra. « Mifalia, ry zatovo, dieny mbola tanora hianao; ary aoka ny fonao hampifalifaly anao amin’ny andro fahatanoranao; ka mandehana any amin’izay sitraky ny fonao sy izay jeren’ny masonao; nefa aoka ho fantatrao fa ho entin’Andriamanitra hotsaraina hianao amin’izany rehetra izany. » Mpitoriteny 11 : 9
Fotoam-piambenana izao koa aoka tsy hanao kitoatoa amin’ny fitandremana izay asain’ny Tompo tandreman a dia ny fiomanana ny amin’ny fihaviany ; fahafahana tsy mampanara-po ny filan’ny nofo fa fahafahana marina ao amin’I Kristy, mamela ny Fanahy Masina hiasa ao anaty,mitarika antsika amin’ny vokatry ny Fanahy hahatonga antsika sy ny firenentsika hiaina amin’ny fiadanana marina tokoa.
Vavolombelon’ny Tompo ny Fanahy Masina .tafian’Andriamanitra ny heriny isika rehefa manaiky hiankina Aminy. Ny fandehanako araka ny Fanahy no ahafahako manohitra ny asan’ny nofo. Izay mety hanary ahy amin’ny helo.
Ataovy filamatra ny hoe “Raha izaho sy ny ankohonako dia hanompo an’I Jehovah izahay.”
Maro ny zavatra sarotra sy manahirana tsy maintsy atrehina raha mbola miaina eto ambonin’ny tany , na izay manana ny Tompo na ireo izay minia mikipy manolona ny fiasan’Andrimanitra .
Tsy natao hisarahana amin’Andrimanitra anefa ny olana fa vao mainka aza natao hampifikitra Aminy . Ataovy ho zava –dehibe ny fifandraisanao amin’Andrimanitra fa izay ihany no antoka hahafahana mandositra ny vesatry ny fiainana raha mbola eto amin’izao tontolo izao
“Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dioa hanampy anao ny zavatra rehetra.” Matio 6 : 33
ANDRIANARISON Hajaniana Célestin , Mpitandrina
Catégories :	Education, Soratra Masina, Toriteny	/ par AnjGab 30 juin 2017